Qualcomm na-eweputa ihe nhazi ohuru maka ekweisi ikuku nke na-ebelata ihe eji ihe karịrị ọkara | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na anyị na-aga gburugburu Amazon na-achọ brọlịkị ekweisi, anyị nwere ike ịhụ otu anyị si ewepụ ọtụtụ ụdị ụdị site na ọnụ ala dị ala. Thesedị ndị a niile, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na nkọwa ha na-egosi anyị nnwere onwe dị oke eluOzugbo anyị nwalere ha, anyị nwere ike ịhụ na ọnụ ọgụgụ a abụghị eziokwu.
Ngwaọrụ ndị a niile Ha na-eji mgbawa Qualcomm, ma ọ bụghị ihe niile. Apple na-eji mgbawa nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara, dị ka Dash Bragi, ndị nhazi nke oriri ha kwekọrọ n'eziokwu. Iji gbalịa idozi nsogbu nnwere onwe a siri ike, ụlọ ọrụ Qualcomm gosipụtara mgbawa QCC5100, mgbawa nke, dịka ụlọ ọrụ ahụ siri kwuo, ihe oriri na-ebelata ruo 65%.
Ihe mgbawa QCC5100 abụghị naanị na-enye anyị nnwere onwe ka ukwuu, kamakwa saa mbara ha, ihe na tiori na-emegide oriri mgbe mmejuputa Bluetooth version 5.0. Ihe nhazi a abuo nke oma dika onye bu ya ụzọ ma nye ndi oru ohere itinye usoro nbughari mkpọtụ ka mma na mgbakwunye na isoro ndi na enyere aka dika Alexa ma obu Google Assistant.
Ha na-enye nkwado maka Enhanced ANC, aptX na aptX HD na mgbakwunye na usoro Qualcomm TrueWirelss Stereo. Companylọ ọrụ America na-ekwu na ruo ọkara nke mbụ nke afọ ọ gaghị enwe ụdị ọ bụla ịre ahịa, yabụ ọ ga-abụ na o yikarịrị ruo na ngwụcha afọ a ma ọ bụ mmalite nke na-esoteKa anyị ghara ịhụ igwe bluetooth iji nweta teknụzụ a nke kachasị mma, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị anyị maka ọtụtụ awa na-enweghị ihe ọghọm nke ịpụ batrị na mgbanwe mbụ, dịka ọ na-emekarị n'ọtụtụ wireless ekweisi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Qualcomm na-eweputa ihe nhazi ohuru maka ekweisi ikuku na-ebelata ihe eji ihe karịrị ọkara